EURO 2016: Xulka qaranka Faransiiska oo xaaqay Iceland una gudbay afar dhammaadka tartanka + Sawirro – Gool FM
EURO 2016: Xulka qaranka Faransiiska oo xaaqay Iceland una gudbay afar dhammaadka tartanka + Sawirro
Haaruun July 3, 2016
(Paris) 04 Luuliyo 2016 – Xulka marti gelinaya koobka qaramada Yurub 2016 ee Faransiiska ayaa u awood sheegtay Iceland, waxaana uu u gudbay afar dhammaadka EURO 2016, kaddib markii uu 5-2 kaga adkaaday Iceland.
Kulankan oo ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu soo xiray kulamada siddeed dhammaadka ayaa goolka hore waxaana u daah rogay France, weeraryahanka kooxda Arsenal ee Olivier Giroud, kaddib markii uu cagta bidix ku dhammaystiray kubbad uu Matuidi dhigay meel ka dambaysa daafacyada Iceland.
Ciyaarta ayaa u muuqatay mid natiijadu ay dhinac u dhacday markii afar gool laga dhaliyey qeybta hore xulka Iceland, waxaana goolka labaad ee France saxiixay 20′ daqiiqo Paul Pogba, markii uu madax xoggan daba mariyey goolhaye Bödvarsson, kaddib gees laad ama koorno uu soo qaaday Griezmann, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-0 oo ay hoggaanka ku qabteen wiilasha Faransiiska.
Goolka saddexaad ee Faransiiska ayaa yimid 43′ waxaana cagta bidix ku dhaliyey Dimitri Payet, inta aan la’ aadin qeybta nasashadana waxaana ciyaarta hurdo u diray oo goolka afaraad ka dhaliyey Iceland Antoine Griezmann markii uu goolhayaha kubadda ka dul qaaday, sidaas ayaana lagu kala nastay 4-0 oo ay ciyaarta ku hoggaaminayeen marti geliyeyaasha tartanka ee Faransiiska.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay xulka Iceland ayaa hal gool iska soo celiyey 56′ daqiiqo, waxaana u dhaliyey Kolbeinn Sigthorsson, laakiin labo daqiiqo kaddib Olivier Giroud ayaa dhaliyey goolkii shanaad ee France iyo goolkiisii labaad ee kulankan, kaasoo ahaa madax xoog leh, kaddib bulusoon la soo qaaday, waxaana uu kulanka dhigay 5-1.
Xulka ay Iceland ayaa la yimid goolkooda labaad, waxaana madax ugu dhaliyey 84’daqiiqo Bjarnason, kaddib karoos uu soo qaaday Bödvarsson, laakiin goolkaas guuldarro kama badbaadin, waxaana xulka France uu ugu dambayn ku adkaaday 5-2.
Xulka qaranka Fransiiska ayaa sidaas ku gaaray afar dhammaadka Euro 2016, iyadoo wiilashii soo reebay Ingiriiska ee Iceland tartanka laga tuuray.
Waxaa lagu naaneysaa ‘TAYO’, muxuu ku baxsanayaa maadaama uu GAABAN yahay,?, halkuu ka galayaa SHAXDA Arsenal?….(Wax kasta oo aad uga baahan tahay saxiixa cusub ee Gunners Takuma Asano)
EURO 2016: Yuu xulka Faransiisku ku beegmayaa wareegga afar dhammaadka, yaase loo doortay Man Of The Match?